परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सन - सौन्दर्य - प्रकाशितः आश्विन १७, २०७५ - नारी
परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सन
परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सन के हो ?
परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सन आफ्नो प्राकृतिक आइल्यासेसमा उस्तै परेला जोड्नु हो । यसबाट लुक्समा कृत्रिमपनको कुनै छनकसम्म देखिँदैन ।
यो कसरी गरिन्छ ?
परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सनका लागि उच्च गुणस्तरको ग्लु तथा प्राकृतिक आइल्यासेस (विदेशबाट आयातीत) को आवश्यकता पर्छ । ग्लुको सहायताले व्यक्तिको आफ्नै परेलाको आधा भागमा एक–एक गर्दै अर्को परेला टाँस्दै गइन्छ । यो काम गर्दा अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
यसको साइड इफेक्ट पनि छ कि ?
आँखाबाहिर त्यसमा पनि कृत्रिम नभई प्राकृतिक नै परेला राखिने हुनाले यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन । त्यति मात्र होइन हामीले प्रयोग गर्ने ग्लु र परेला आँखामा परीक्षणपछि उत्पादित उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले यसले कुनै बेफाइदा गर्दैन ।
परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सन गर्न कति समय लाग्छ ?
यो सहज काम होइन । त्यसै त परेला मसिनो हुन्छ त्यसमाथि पनि आँखाजस्तो संवेदनशील अङ्गसँग जोडिएको कुरा हुनाले एक्सटेन्सन गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ । दुवै आँखाका परेला एक्सटेन्सन गर्न २ देखि ४ घन्टा समय लाग्छ ।
यो कस्तो देखिन्छ ?
आइल्यासेस एक्सटेन्सन गरिसकेपछि जोकसैको लुक्समा पूर्ण परिवर्तन देखिन्छ । यसबाट सानो आँखा ठूलो देखिने मात्र होइन आँखा आकर्षक र ग्ल्यामरस पनि देखिन्छ ।
सिजर एन्ड साउन्ड ब्युटी स्टुडियो, मीनभवन
कार्तिक २१, २०७४ - नेल एक्सटेन्सन
असार ८, २०७४ - जेल नेल एक्सटेन्सन